SA Covid-19 Vaccine Strategy (isiXhosa Translation) - SA Corona Virus Online Portal
SA Covid-19 Vaccine strategy (isiXhosa translation)
2021-01-27T20:52:17+02:00Jan 27th, 2021|Press Releases and Notices|
IMIYALEZO ENGUNDOQO YESICWANGCISO KUNYE NOKUKHUTSHWA KWECHIZA LOKUGONYELA I-COVID-19 EMZANTSI AFRIKA
Ukufikelela kumachiza okugonyela i-COVID-19 yeyona nto ibalulekileyo kuthi.
UMzantsi Afrika uza kufumana isigidi esinye samathamo echiza lokugonyela i-COVID-19 kweyoMqungu kunye namathamo angama-500 000 kweyoMdumba echiza lokugonya le-Oxford University-AstraZeneca elivela kwi-Serum Institute yase India (i-SII).
Siza kuqala ngokugonya abasebenzi bezempilo belizwe lethu abaqikelelwa kwi-1.25 yezigidi.
Urhulumente usebenza ngokusondeleyo neGunya loLawulo lweeMveliso zeMpilo loMzantsi Afrika (i-SAHPRA) ukuqinisekisa ukuba akukho kulibaziseka ekuvumeleni ukusetyenziswa kwechiza lokugonya.
Ichiza lokugonya le-Oxford University-AstraZeneca sele livunyiwe ngabalawuli abohlukeneyo kwihlabathi liphela kwaye lizakhutshwa nakwamanye amazwe.
Sifikelele kwisivumelwano neZiko le-COVAX lokuba sizakufumana amachiza okugonya alingene ukugonya iipesenti ezili-10 zabemi.
La mathamo alindeleke ekuqaleni kwekota yesibini yonyaka.
Siyaqhubeka nokusebenza neenkampani ezahlukeneyo zoxubo-mayeza ukuqinisekisa ukuba unyaka ka-2021 uphela sigonye iipesenti ezingama-67 zabemi.
Ichiza lokugonya liza kukhutshwa ngezigaba.
Khange kubekho kulibaziseka kwangabom ekufikeleleni kwichiza lokugonyela i-COVID-19, njengoko imeko ihlala imaxongo; zonke izinto kufuneka zithathelwe ingqalelo.
Sikhetha amachiza okugonya sijonge ukhuseleko nokusebenza kwawo, ukusebenziseka lula, ukugcinakala, ukuhanjiswa, ubulula bokufumaneka kwawo kunye neendleko.
Ichiza lokugonya siza kulikhupha sisebenzisa izigaba ezintathu siqala ngabona bantu basesichengeni.
Sijonge ukuba uthi uphela unyaka ka-2021 sibe sesigonye iipesenti ezingama-67 zabemi, nto leyo eza kwenza ukuba sikwazi ukuphumeza ukhuseleko labemi abaninzi (i-herd immunity).
Kwisigaba sokuqala siza kugxila kubasebenzi bezempilo abajongene ngqo nobhubhane.
Kwisigaba sesibini siza kugonya abasebenzi abasisiseko, abantu abakwiindawo zendibanisela, abantu abaneminyaka engaphezulu kwama-60 kunye nabantu abaneminyaka engaphezulu kwe-18 abahleli benezigulo abanazo.
Kwisigaba sesithathu siza kugxila kubantu abaneminyaka engaphezulu kwe-18, sijolise kubemi abangama-22 500 000.
Urhulumente uza kufumana, ahambise ze abeke iso ukukhutshwa kwechiza lokugonya.
Urhulumente njengomthengi wamachiza okugonya ekukuphela kwakhe uzakulihambisa koorhulumente bamaphondo nakwicandelo labucala.
Siza kufumana izitokhwe ezikhoyo kubavelisi abohlukeneyo.
Ngoko ke kuza kubakho amachiza okugonya amaninzi ohlukeneyo kwinkqubo yethu, kodwa awunakugonywa ngamachiza okugonya amabini ohlukeneyo.
Inkqubo yokugonya iza kusekelwa kubhaliso lwangaphambi kokugonya kunye nenkqubo yokuchongwa.
Bonke abo bagonyiweyo bazakufakwa kwirejista yesizwe baze banikwe amakhadi okugonya.
Ikomiti yesizwe yokukhutshwa izakongamela ukuphunyezwa kwenkqubo yokugonya kuwo omabini amacandelo elikarhulumente nelabucala.
Amachiza okugonya asindisa ubomi!
Kukho ubungqina obuninzi bezenzululwazi bokuba ukugonya yeyona ndlela ilungileyo yokuzikhusela kusuleleko oluxhalabisayo.
Amachiza okugonya awakuniki intsholongwane, koko afundisa amajoni omzimba wakho ukuba aqonde kwaye alwe nosuleleko.
Ichiza lokugonyela i-COVID-19 linika umzimba imiyalelo yokwakha ukuxhathisa kusuleleko kwaye alitshintshi iiseli zomntu.
Amachiza okugonya sele enciphise ukugula nokubulawa zizifo ezosulelayo ezifana nengqakaqa, ipoliyo, ukudumba isibindi, imasisi, uminxano-mihlathi,isifo sokukhohlela unkonkonko kunye nokukrala kwemiphunga kwihlabathi liphela.
Ukugonya abantu aboneleyo kunga nceda ukudala ukhuseleko lwabemi abaninzi ze kutshabalalise esi sifo.
Amachiza okugonya afakwa phantsi kovavanyo olungqongqo ukuqinisekisa ukuba akhuselekile kwaye ayasebenza.
Onke amachiza okugonya adlula kwinkqubo ebanzi yovavanyo ngabalawuli bezonyango ukuqinisekisa ukuba akhuselekile.
Iinkampani zoxubo-mayeza zinikezela ngazo zonke iziphumo zovavanyo lwaselabhoretri kunye nezeemvavanyo zokhuseleko ukuqinisekisa ukuba ichiza lokugonya liyasebenza.
Naziphi na iinkxalabo zokhuseleko ziyafunyanwa ngabalawuli xa behlolisisa idatha.
Amachiza okugonya enzelwe ukusindisa ubomi hayi ukucinezela, ukuthakatha, ukubanga okanye ukuhlohla iingqondo zabantu ukuze bacinge ngendlela ethile.
Ichiza lokugonyela i-COVID-19 yinkonzo edalelwe ukuphila koluntu.
UNondyebo weSizwe uzibophelele ekuqinisekiseni ukuba inkxaso-mali ayingomqobo ekufikeleleni kumachiza okugonya.
Ulwabiwo olupheleleyo lohlahlo lwabiwo-mali lokufumana amachiza okugonyela i-COVID-19 luzakukwaziswa kuHlahlo Lwabiwo-mali lweSizwe lonyaka ka-2021. Oku kusisongezelelo samalungiselelo enkxaso-mali enziwe kunyaka-mali wangoku wokuthenga i-odolo yokuqala yamachiza okugonya, ejolise kuqala kubasebenzi abajongene ngqo nobhubhane.
Ngokubanzi, inkxaso-mali izakuvela kuhlahlo lolwabiwo-mali olongezelekileyo, uhlenga-hlengiso kwakhona lwemali, ukunyuka kweengeniso, kukho nethemba lokuba ingavela nasekubambisaneni necandelo labucala.
Urhulumente utyikitye isibophelelo sezezimali ezibophelela ekuhlawuleni iipesenti ezingama-85 zazo zonke iindleko zexesha elizayo, malunga ne-R2.2 yezigidigidi, kwiZiko le-COVAX. Amanye amalungiselelo kuxoxwa ngawo ngokudibeneyo kunye nabavelisi abohlukeneyo bechiza lokugonya.
INgxowa-mali yeManyano ibe nesisa yenza umnikelo wentlawulo yangaphambili emalunga neepesenti ezili-15 zeendleko zizonke.
Sisebenza ngokubambisana ukukhusela ichiza lokugonyela i-COVID-19.
Urhulumente uza kuba nakho ukufumana ichiza lokugonya ngemali esuka kwingxowa-mali yakhe.
Amashishini kunye nezicwangciso zoncedo lonyango zize ngaphambili ukuxhasa iinzame zikarhulumente kwaye oku kwamkelekile. Le ntsebenziswano iza kukhokelwa yimigaqo-nkqubo yemanyano yezentlalo nokunganyanyezelwa kwaphela korhwaphilizo
ISebe lezeMpilo lityikitye izilungiso kwimimiselo ukuvumela ukuba amachiza okugonya kunye nezinye iindlela zonyango zibe yinxalenye yesibonelelo esincinci sezicwangciso zonyango esimiselweyo.
Iinkcukacha ezithe vetshe ziyafumaneka ku https://sacoronavirus.co.za/category/mac-advisories/